ए डिभिजन लिग : छैटौँ चरणपछि मनाङलाई ३ अंकको अग्रता, मछिन्द्र अझै गोलविहीन, कुन टिमको अवस्था कस्तो? :: PahiloPost
ए डिभिजन लिग : छैटौँ चरणपछि मनाङलाई ३ अंकको अग्रता, मछिन्द्र अझै गोलविहीन, कुन टिमको अवस्था कस्तो?
7th December 2018, 09:14 am | २१ मंसिर २०७५
काठमाडौँ : 'शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग २०७५' मा छैटौँ चरणसम्मको खेल सकिएको छ। गत असोज १३ गतेदेखि सुरु भएको लिगमा सहभागी १४ क्लबले ६-६ खेल खेलिसकेका छन्। कूल ९१ मध्ये ४२ खेल समाप्त भइसकेको छ।
उपाधि दाबेदार क्लब मनाङ मर्स्याङ्दीले अहिलेसम्म सबै ६ खेल जितेको छ। मनाङसँगै अपराजित रहेको अर्को क्लब त्रिभुवन आर्मीले ४ खेलमा जित र दुई बराबरी खेलेको छ। लिगमा यी दुई क्लबमात्र अहिलेसम्म अपराजित छन्। मनाङ र आर्मीबीच लिगको आठौँ राउण्डमा भिडन्त हुनेछ। यस खेलबाट उपाधि होडमा को अगाडि भन्ने खाका तयार हुनेछ।
यस्तै एक खेलमात्र हारेका थ्री स्टार र संकटा अंक तालिकामा आर्मी भन्दा अगाडि छ। मनाङसँगै आर्मी र थ्री स्टारलाई उपाधिको मुख्य दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ। तर आर्मीले दुई खेल बराबरी खेलेपछि शीर्ष स्थानको मनाङभन्दा ४ अंकले पछि परेको छ।
यसैगरी छैटौँ चरणसम्म आइपुग्दा दुई क्लब अझै जितविहिन छन्। मछिन्द्र र एनआरटीले कुनै खेल जित्न सकेको छैन।
छैटौँ चरणको खेलको नतिजा
एपीएफ २-१ एनआरटी
पुलिस १- २ संकटा
मनाङ १-० जावलाखेल
सरस्वती १-२ थ्री स्टार
हिमालयन शेर्पा १-२ च्यासल युथ क्लब
फ्रेण्ड्स ०-० आर्मी
ब्रिगेड ०-० मछिन्द्र
मनाङ र आर्मीको अपराजित यात्रा कायम
उपाधि दाबेदारमा सबैभन्दा अगाडि रहेका दुई क्लब हुन् मनाङ मर्स्याङ्दी र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी। सोहीअनुसार दुवै टोलीले अपराजित यात्रालाई छैटौँ चरणसम्म पुर्‍याएका छन्।
मनाङले पछिल्लो खेलमा पेनाल्टी गोलको मद्दतमा जावलाखेललाई १-० ले हराउँदै महत्वपूर्ण ३ अंक जोड्यो। उता आर्मी भने फ्रेण्ड्ससँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो। कठिन जितपछि मनाङले शतप्रतिशत नतिजा हात पार्दा आर्मीलाई बराबरीले उपाधि यात्रामा धक्का दिएको छ। मनाङले सबै खेल जित्दै १८ अंक जोडेको छ।
आर्मीले सिजनको दोस्रो बराबरी खेलेपछि ६ खेलबाट १४ अंक जोडेको छ। आर्मी अझै मनाङभन्दा ४ अंकले पछि छ र अंकतालिकामा चौथो स्थानमा झरेको छ। पाँचौ चरणमा आर्मी दोस्रो स्थानमा थियो।
आर्मी भन्दा अगाडि थ्री स्टार र संकटा क्लब छन्। दुवैले समान १५ अंक जोडेका छन्। गोलअन्तरमा थ्री स्टार अगाडि छ। थ्री स्टार र संकटाले समान ५ खेल जित्दा एक खेलमात्र हारेका छन्। थ्री स्टारले पछिल्लो खेलमा एक गोलले पछि परेर पनि सरस्वतीविरुद्ध २-१ को पुनरागमन जित हात पार्‍यो। संकटाले विभागीय टोली पुलिसलाई हरायो।
मनाङ र आर्मीबीच आठौँ चरणमा खेल हुनेछ। यस्तै आर्मीले नवौँ चरणमा थ्री स्टार क्लबसँग खेल्नेछ। मनाङले दशौँ चरणमा नेपाल पुलिससँग खेल्नेछ। यी तीन खेलले उपाधि यात्रालाई थप रोमाञ्चक बनाउने पक्का छ।
अन्डर डग संकटा
यस सिजन लिगमा कुनै टोलीले अप्रत्यासित नतिजा निकालिरहेको छ भने त्यो संकटा नै हो। झण्डै आधा खेल सकिँदा संकटाले सम्भव हुने १८ मध्ये १५ अंक जोडेको छ। लिगको उपाधि दाबेदार क्लबहरु मनाङ मर्स्याङ्दी, थ्री स्टार र आर्मीलाई टक्कर दिने टोलीको रुपमा संकटा देखिएको छ।
संकटा यस लिगमा अन्डर डगको रुपमा उदाएको छ। त्यसको छनक पुलिस विरुद्धको पछिल्लो खेलमा पनि देखायो।
छैटौँ चरणमा विभागीय टोली पुलिसलाई हराएपछि संकटाले १५ अंक जोडेको हो। समान अंक भएपछि गोल अन्तरमा पछि रहेको संकटाले अंकतालिकामा आर्मीलाई भने एक अंकले पछि पारेको छ। संकटाले अहिलेसम्म खेलेको मध्ये आर्मीसँग मात्र हार बेहोरेको छ। यद्यपि संकटाले अझै नाम चलेका क्लबहरु मनाङ, थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पासँग खेल्न बाँकी छ।
संकटाका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले प्रत्येक खेल जितेपछि आफ्नो लक्ष्य टप फाइभमा पुग्नु रहेको र त्यही अनुसार आफ्नो प्रदर्शन भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। तर उनले संकटाले उपाधि दाबेदार रहेको भन्ने अहिलेसम्म नसोचेको बताएका छन्।
संकटासँग हारेपछि पुलिसको उपाधि दाबेदारीमा केही धक्का लागेको छ। ६ खेलबाट १० अंक रहेको पुलिस शीर्ष स्थानको मनाङभन्दा ८ अंकले पछि परिसकेको छ भने पाँचौ स्थानमा छ। आर्मी र संकटासँग हारेको पुलिसले अझै मनाङ, थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पासँग खेल्न बाँकी छ। पुलिसले शनिवार सातौँ चरणको पहिलो खेलमै शेर्पासँग खेल्दैछ र त्यस खेलपछि नै पुलिसको उपाधि सम्भावना बारे प्रष्ट हुने प्रशिक्षक अनन्त थापाले बताएका छन्।
तङग्रिँदै च्यासल र एपीएफ
लिग अगाडि केही नाम चलेका र स्टार खेलाडी भित्र्याएको च्यासलले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। उता कान्छो विभागीय टोली एपीएफको हालत पनि उस्तै देखिएको छ।
पछिल्लो खेलमा भने यी दुई क्लबले जित हात पार्दै केही राहत महसुस गरेका छन्। च्यासल र एपीएफले दोस्रो जित हात पारेका हुन्। च्यासलले एक गोलले पछि परेर पनि आत्मघाती गोलको मद्दतमा हिमालयन शेर्पालाई २-१ ले हरायो भने एपीएफले एनआरटीलाई पनि २-१ ले नै हरायो।
६ खेलबाट दुवैले समान ७ अंक जोडेका छन्। गोलअन्तरका आधारमा च्यासल सातौँ र एपीएफ आठौँ स्थानमा छ।
यस्तै छैटौँ चरणमा थ्री स्टारसँग पराजित भएको सरस्वती नवौँ स्थानमा छ भने आर्मीलाई बराबरीमा रोकेको फ्रेण्ड्स दशौँ स्थानमा छ। मनाङसँग हारेको जावलाखेल ११औँ र मछिन्द्रसँग बराबरी खेलेको ब्रिगेड १२औँ स्थानमा छ।
गोलको खोजीमा मछिन्द्र
यस सिजन लिगमा झण्डै आधा खेल खेलिसक्का पनि दुई क्लब जितविहिन छन्। त्यसमा पनि एउटा क्लबले अहिलेसम्म गोल गर्न सकेको छैन।
एनआरटी र मछिन्द्रले अहिलेसम्म जितको स्वाद पाएका छैनन्। मछिन्द्रले त गोल समेत गर्न सकेको छैन।
६ खेल खेल्दा मछिन्द्रले तीन खेल बराबरी गरेको छ। तीनवटैमा मछिन्द्रले गोलरहित बराबरी खेल्यो। बाँकी तीन खेलमा मछिन्द्र पराजित भयो। पछिल्लो खेलमा मछिन्द्रले ब्रिगेड ब्वाइजसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो।
जितविहिन अर्को क्लब एनआरटी पछिल्लो खेलमा एपीएफसँग २-१ ले पराजित भयो। अहिलेसम्मको ६ वटै खेल ठूला क्लबसँग खेलेकाले एनआरटीले सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। एनआरटीले ६ खेलबाट एक अंक मात्र जोडेको छ र अंकतालिकामा पूछारमा छ।
ए डिभिजन लिग : छैटौँ चरणपछि मनाङलाई ३ अंकको अग्रता, मछिन्द्र अझै गोलविहीन, कुन टिमको अवस्था कस्तो? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।